PDRC oo Haweenka Gobolka bari kala qeyn qaadatay Xuska 8marso – SBC
PDRC oo Haweenka Gobolka bari kala qeyn qaadatay Xuska 8marso
Hay’adda cilmi baarista Puntland ee PDRC ayaa maanta magaalada Boosaaso ee Xarunta Gobalka Bari ku qabatay munaasabad lagu xusayey maalinta haweenka aduunka oo caalamka oo dhan laga xuso .
Munaasabadan oo halkudhiggeedu ahaa “kordhinta kaalinta ay haweenku ku leeyihiin Siyaasadda Puntland” ayaa waxaa kasoo qayb galay cilme baareyaal ka tirsan hay’adda PDRC iyo xubno ka socdey ururada haweenka iyo kuwa dhalinyarada ee gobolka Bari.
Xamdi Axmed Cilmi oo ka tirsan PDRC ayaa kulankaasi ugu horeyn ka jeedisay qudbad, waxayna ku warbixisey ujeedada ay xuska maalinta haweenka u sameeyeen, iyadoo sheegtay inay tahay mid ay ugu talagaleen muujinta khiimaha ay maalintan u leedahay Hawenka.
Waxa ay sidoo kale Sheegtay in Xamdi in Haweenka Puntland ay tahay in ay u istaagaan sidii ay kor ugu qaadi lahaayeen kaalintooda siyaasada ee Puntland
Sidoo kale waxaa hadal halkaasi ka jeediyay Masuuliyiin ka tirsan PDRC waxayna ka mid ahaa Daahir Maxamed oo tibaaxay in Kaalin sare uga jiraan haweenka Bulshada loona baahanyahay in ay ku loo istaago sidii waxloola qaban lahaa dhinac walba.
Maryan Maxamed Xasan (Maryan Guduudo) Gdoomiyaha Hawenka gobolka Bari ayaa dhankeeda muujisay sida ay ugu farxsanyihiin ka haween gobol Bari ahaan kulanka iyo xuska Maalinta Haweenka ayna siweyn u soo dhaweynayaan PDRC sida ay ugala qeybqaadanayaan xuska.
Sikastaba ha ahaatee looma kala harin hadaladii halkaasi laga jeediyay oo ay Haweenka badi ka soo jeediyeen Hadalo iyagoona badi u mahad celiyay PDRC sida ay ugala qeyn qaadanayaan arimahan oo kale ayna u mahad celiyeen